Showing १२१-१३० of १७२ items.
धरानको तीज उत्सव
धरान / धरान १४ स्थित पिण्डेश्वर मन्दिरमा आज माहिलाहरुले नाचेर तीज मनाएका छन् । रातो सारीमा सजिएका महिलाहरुले दिनभरी नाचेर तीज मनाए । सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले निराहार ब्रत बसेर महादेवलाई पतिकोरुपमा पाएकी थिइन् । सत्ययुगमा आजैको दिन निराहार व्रत बसी पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाए जस्तै आजको दिनमा व्रत बस्दा राम्रो पति पाउने र मनोकामना पूरा हुने विश्वासमा नारीहरु व्रत बस्ने गरेको भनाई रहेको छ । धरानको पिण्डेश्वर महादेवको मन्दिरलगायत देशभरको शिवालयहरुमा ब्रतालु महिलाहरुले रमाइलो गरेर तीज मनाएका छन् । उनीहरुले महादेवलाई जल चढाएर आर्शिवातसमेत मागे । पिण्डेश्वर बाबाधाम समितिले र
प्रकाशित मितिः भदौ १६, २०७६
६२० पटक पढिएको
पर्यटकीय गन्तव्य यलम्बर पार्क
धरान / धरान उपमहानगरभित्र रहेको एलेम्बर सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह प्रदेश १ को नमुना वन समुह हो । यहाँका वन क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकहरुको बाह्रैमास घुइचो हुने गरेको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि उजाड बन्दै गरेको वन क्षेत्रलाई सरकारले समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने नीति ल्यायो । यहि नीति अनुरुप समुदायले संरक्षण गरेको धरानका सामुदायिक वन समुहहरु यति बेला नमुना बनेका छन् । यहाँका वन समुहवीच वन संरक्षण र पर्यटकिय गन्तव्य बनाउन अघोषित रुपमा प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । यलम्बर वन समुहले वन संरुक्षण र पर्यटकीय गन्तव्य बनाए बापत गत २०६० सालमा सरकारले ५० हजार पुरस्कार राशीसहित गणेशमानसिंह हरिय
प्रकाशित मितिः भदौ १५, २०७६
१,३३५ पटक पढिएको
तस्विरहरूः किस्तीका चाैधरी
उदयपुरको आकाशमा प्याराग्लाइडिङ(फोटो फिचर)
साहसिक खेल अन्तर्गत पर्ने प्याराग्लाइडिङ कोर्षका लागि उदयपुरको वेलका नगरपालिकास्थित सप्तकोशी नदीको किनारालाई रोजिएको छ। उक्त क्षेत्रलाई प्याराग्लाइडिङको स्कुलको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । त्यसका लागि बेलका नगरपालिकाले ४५ रोपनी जग्गा समेत उपलब्द गराएको छ । वेलकाको वोक्ताङ डाँडाबाट उडेको प्याराग्लाइडिङ कोशी नदीको किनारामा ल्याण्डिङ गर्छ । केही दिन अघि नेपाली सेनाका २४ जना खेलाडीहरुले १५ दिने सोलो प्याराग्लाइडिङ कोर्ष पुरा गरेका छन् ।
बिहानै धरानको भानुचोक
धरानको भानुचोक विहान ३ बजे व्युझन्छ । चिया बेच्नेहरु यत्रतत्र हुन्छन् । धरान भएर विभिन्न स्थानमा जाने गाडीका कर्मचारीहरु यात्रु खोजिमा निस्कन्छन् । भानुभक्तको सालिक वरिपरी फलफुल पसलेहरुको पनि उतिकै भीड हुन्छ । मर्निङ वर्क गनेहरुको ओहोरदोहोर उस्तै हुन्छ ।
प्रकाशित मितिः भदौ ११, २०७६
१,९५७ पटक पढिएको
वीपी प्रतिष्ठानमा यस्तो छ वेथिति, विमारीलाई सास्ती(तस्विरसहित)
धरान / दक्षिण एसिया कै नाम चलेको उत्कृष्ट अस्पताल भनेर धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाम लिदैं आएको छ । उत्तर किमाथाङ, पूर्व ओलाङचुङगोलादेखि पश्चिममा जनकपुर हुदै भारतको विहारबाट यहाँको सेवा लिन आउने गरेका छन् । एउटा विश्वासले यहाँ उपचार गर्न आउने गरे पनि पछिललो समय प्रतिष्ठानको अस्थव्यस्थताले उनहरुले हैरानी खेप्दैं आएका छन् । विहान ६ बजेदेखि खाली पेटमा लाइन बस्दा अर्को रोग उव्जिने गरेको इलामबाट पेटको इलाज गर्न आएका वीरवल लिम्बु बताउछन् । डाक्टरकाेमा पुग्नु अघि पुर्जा लिन बसेकाे लाइन । बास्तावमा यहाँका कर्मचारी पदाधिकारीहरु कमिसनको चक्करमा यहाँ आउने विमारीको सुविधाको
प्रकाशित मितिः भदौ ५, २०७६
१,८८४ पटक पढिएको
मनै लाेभ्याउने गोर्खा स्मृति पार्क(फोटो फिचर)
धरान / धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नं २० स्थित माछामारा डाँडा धरान बजारबाट करिब ९ किलोमिटर उत्तर पश्चिममा छ । भूपू गोर्खा सैनिक एवं परिवारहरुले करोडौंको लगानीमा ब्रिटिश गोर्खा स्मृति पार्क बनाइरहेका छन् । यो पार्कलाई गोर्खा सैनिकहरुको लागि पवित्र तीर्थस्थलकोरुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको पार्क परिकल्पनाकार रमेश राईले बताए । यो क्षेत्र पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । धरानको सुन्दर दृष्यावलोकन गर्न सकिन्छ । यो ग्रावेल सडक नेपालकै पवित्र तिर्थस्थल विष्णुपादुका जाने सडक पनि हो । मक्का मदिनाको जस्तै पवित्र तीर्थस्थलको रुपमा यसलाई विकास गरिने तयारी छ । यहाँ गोर्खा स्मारकको मुनि ७ फिट गहिर
२,९०३ पटक पढिएको
ताप्लेजुङमा रोपाई जात्रा (फोटो फिचर)
ताप्लेजुङ / परम्परागत रुपमा निकालिदैं आएको रोपाई जात्रा शनिवार ताप्लेजुङमा भब्यताका साथ मनाईएको छ । पूर्वी पहाडको मौलिक पर्वको रुपमा रहेको रोपाई जात्रामा धान रोप्दा गरिने कृयाकलापसँग विभिन्न जातजातीको संस्कृति र कला झल्काउने खालको अभिनय गरिन्छ । रोपाई जात्रा सदरमुकाम फुङलिङमा विहान ११ बजेवाट तोक्मेडाँडावाट सुरु भई बजार परिक्रमा गरेको थियो । रोपाई गीतको साथमा अघिअघि गोरु हली अनि पछि पछि रोपारले हिलोमा धान रोपेको अभिनय गर्दै एक सय धेरै बालबालिका र युवायुवती जात्रामा सहभागी हुने नेपाल भाषा तथा साँस्कृतिक समाज ताप्लेजुङका अध्यक्ष निरोज श्रेष्ठले जानकारी दिए । लाखेजात्रा हामी सवैको जात्रा भन
७९५ पटक पढिएको
१,०३८ पटक पढिएको
पिण्डेश्वरमा सोचेजस्तो आएनन् भक्तजन, ३ लाखले चढाए जल (फाेटाे फिचर)
धरान/ आज साउन महिनाको अन्तिम सोमबार धरान–१४ स्थित पिण्डेश्वर मन्दिरमा जल चढाउनेहरुको चहलपहल खासै देखिएन । अन्तिम सोमबारसम्म ३ लाख भक्तजनहरुले जल चढाएको पिण्डेश्वर बाबाधाम व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विकास बनेपालीले जानकारी दिए । ‘याे बर्ष मलावासका कारण भक्तजनहरु सोचे जस्तो आएनन । मन्दिरको ढोका २४सैं घण्टा खुल्ला गरिएकाले अघिल्ला बर्षभन्दा भीडभाड भने कम भयो ।’–बनेपालीले भने । पाँच लाख भक्तजन आउने अनुमान गरिए पनि यो बर्ष करिव ३ लाख मात्र आए भक्तजन आएको उनले बताए । पश्चिम नेपाल, भारतको बंगाल, दार्जेलिङ, सिक्किम, विहारबाट ४० प्रतिशत भक्तजनहरु आएको अध्यक्ष बनेपालीले बताए ।
तस्बिरः किस्तीका चाैधरी
बोलबमको रौनक(फोटो फिचर)
सिरहा / सिरहा जिल्लाको कर्जन्हा नगरपालिका वडा नं. १ स्थित उत्तरवाहिनीमा बोलबमको रौनक बढेको छ । हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले शिवको महिमा गाउँने महिना हो साउन । साउन लागेसँगै जताततै बोलबमको चहलपहल बढ्दो देखिएको छ । विशेष गरी साउनको हरेक सोमबार गेरुवस्त्र धारण गरी नदी तथा कुण्डमा गई स्नान गरी त्यहाँबाट ल्याएको जल गाईको दूध, बेलपत्र शिव मन्दिरमा चढाइन्छ । जलाशयबाट जल ल्याई “बोलबम” भन्दै यात्रा गर्दाको वातावरण बेग्लै देखिएको छ । हरेक सोमबार बोलबम यात्रा गर्नेहरुको ठूलो भीडले सिरहा जिल्लाको मिर्चैया समेत बोलबममय भएको छ । सिरहा जिल्लाकै एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थलको रुपमा मानिने उत
प्रकाशित मितिः श्रावण २०, २०७६